Sarintany eran'izao tontolo izao momba ny Boom E-Commerce | Martech Zone
Na dia fantatsika tsara aza ny fitomboan'ny e-varotra haingana any Etazonia, amin'ny 4x ny tahan'ny antsinjarany, misy firenena hafa izay manao ireo taha ireo ho toy ny mihetsika amin'ny hafainganam-pandeha. Any Sina, ny e-varotra dia nitombo 51% tamin'ny 2013 ary ny varotra e-varotra any India dia vinavinaina hiakatra manomboka amin'ny $ 13B amin'ny 2013 ka hatramin'ny $ 70B amin'ny taona 2020.
Mitantana fifanakalozana betsaka noho ny eBay sy Amazon natambatra, ny orinasa sinoa Alibaba dia manome ny fotodrafitrasa ho an'ny e-varotra sinoa rehetra. Raha mandeha am-pahibemaso amin'ny NYSE amin'ity taona ity, Alibaba dia ho iray amin'ireo orinasa 20 sarobidy indrindra varotra any Etazonia. Sina no mitarika ny tahan'ny fitomboan'ny varotra e-varotra 57%, arahin'i India amin'ny 29.5%, Brezila amin'ny 13%, ary Etazonia amin'ny toerana faha-5 amin'ny 12%. Ao amin'ny sarintany avy Baynote etsy ambany, jereo ny antontan'isa momba ny e-varotra mahaliana indrindra, miaraka amin'ny topy amin'ny varotra tranonkala, mpitsidika isam-bolana, ary ny taham-pitan'izy ireo ho an'ireo orinasam-barotra e-commerce malaza eto an-tany. Ahoana ny fiovan'ny ezaky ny varotrao haharaka ny firoboroboan'ny e-varotra?
Tags: AlibabaAmazone-Baye-varotraMapizao tontolo izao